Amaphrosesa amasha we-Ultrasonic Yezimboni: Uchungechunge lwe-hdT - Hielscher Ultrasound Technology
Uchungechunge olusha lwamadivaysi e-ultrasonic yezimboni ze-Hielscher lubonisa ukuphakama kwawo: Amaphrosesa asezimboni ze-ultrasonic nge 500W kuya ku-4000W avuselela amandla aphezulu e-ultrasound nokuthembeka, amakhasimende akwa-Hielscher ajwayele ukukwenza, kodwa ahamba phambili ngokusebenza kwawo okusha okusebenza: Ama-ultrasonicators amasha uchungechunge lwe-hdT lunemibala yokuthinta imibala, isilawuli esikude sesiphequluli, ukurekhoda kwedatha okuzenzekelayo kwi-Integrated USD / SD ComboCard, inzwa yokushisa, ukuxhuma kwe-LAN kanye ne-Ethernet nezinye izici eziningi, okwenza inqubo ye-sonication ibe nobungane kakhulu futhi ibe lula ukusebenza nokulawula. Imishini ye-ultrasonic yezimboni ze-Hielscher iklanyelwe ukufeza zonke izidingo zokucutshungulwa okunokwethenjelwa namandla ibhentshi phezulu kanye nezimboni. Izicelo ezijwayelekile ze-ultrasonicators zezimboni zikaHielscher zihlanganisa homogenization, emulsification, ukuhlakazeka & ukuguqula, ukugaya & ukugaya. Ukuthola imiphumela emihle kunqubo ye-ultrasonic, ukulawulwa okugcwele kwamapharamitha wenqubo kubalulekile.
Esinye isici se-hdt series yezimboni yinkomba yokuthinta umbala ngokulawula okuqondile kwenqubo ye-sonication.
Yini ongayilindela ku-hdT version:
isisindisi esindayo esisebenza ngokweqile i-processor ultrasonic
etholakala nge-500W, 1000W, 1500W, 2000W, noma 4000W amandla we-ultrasonic
ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kwamandla, ubukhulu beminyaka, isikhathi sokungena, ukushisa
i-plugable temperature sensor
I-UIP2000hdT – i-digital digital watts entsha ye-industrial ultrasonicator
Ukuthuthukisa ama-processor ultrasonic yezimboni kusuka ku-hd kuya ku-hdT
Thatha ithuba futhi uthuthukise wakho UIP500hd, I-UIP1000hd, I-UIP1500hd, I-UIP2000hd kuya kwi-hdt entsha ye-digitalT!
Ukuze uthole i-sonication ethuthukisiwe futhi elula, i-Hielscher Ultrasonics inikeza amakhasimende akhe akhona ithuba lokuthuthukisa ama-processor awo e-hd-uchungechunge kwi-hdT-standard entsha, ebonakala ngokulawulwa kokuthinta kanye nezici ezihlukahlukene.
Ukuthuthukiswa kuhlanganisa yonke imisebenzi kanye nezici zokulawula okuthinta:
umbukiso wokuthinta umbala w / touch- ne-stylus-sensitive screen, nemenyu yokulawula ye-digital enembile
I-SD-Card slot (i-SD / i-USB-idatha yedatha ehlanganisiwe) yokurekhoda okuzenzakalelayo kwayo yonke imingcele ye-sonication (ifayela le-CSV)
ukubonisa amandla, amandla enetha, imvamisa, nokushisa
i-sensor yokushisa w / isandiso sesandiso
I-Ethernet: Isilawuli Esikude Sesiphequluli nge-interface ye-LAN webhubhu (ikhebula le-ethernet efakiwe)
Isikhathi sesikhathi sokusebenza singamaviki angu-1 eHhoelscher's workshop. Ukuguqulwa kwesayithi akutholakali. Izimpendulo zokulawula ezikhona (I-Sub-D isixhumi) ku-panel yangemuva ye-generator zigcinwa. Ku-UIP2000hd, i-wattmeter eyakhelwe ngaphakathi iyakususwa. Ukunakwa: I-PC yangaphambili yokulawula (UPC) ayiyona into esebenzayo ngemuva kokuthuthukiswa kwedivayisi kwi-hdT-standard! Kuwo wonke umsebenzi owenziwe kanye nezingxenye ezithathiwe, i-Hielscher inikeza iwaranti enyanga engu-12.
Ukuze usebenzise lokhu okunikezwayo, okulandelayo kumele kufezeke: Idivayisi (i-transducer, generator, ikhebula) kumele ithunyelwe esimweni esihlanzekile futhi ihlanganiswe ngokucophelela ku: Hielscher Ultrasonics GmbH, Oderstr. 53, 14513 iTeltow, eJalimane
Inhlangano kanye nezindleko zokuthutha, amasiko, kanye nomshuwalense kufanele kuthwale ikhasimende. Kunconywa ukunikeza isimemezelo esincane / esanele sokungenisa okwesikhashana. Isitika sokwezifiso singahlala kudivayisi ngesikhathi sokuthuthukisa umsebenzi. Ukuguqulwa kwedivayisi kuncike ekulawulweni okuthekeliswayo (mhlawumbe kuncike ekuvumelweni kwe-BAFA. Uma kwenzeka ukuthekeliswa okuvunyelwe, idivayisi kufanele ihlale eHielscher futhi izobhujiswa ngemva kwezinyanga ezingu-12). Abasebenzi bethu bazokusiza ngokuphathelene nezimo zokuthutha.
Ngaphambi kokuguqulwa kwedivayisi, ukusebenza nokusebenza kwedivayisi kuzohlolwa. Uma kwenzeka ngesikhathi sokuhlolwa, umsebenzi wokuguqulwa noma ukuhlolwa kwamanye amaphutha, ukulimala noma izinkinga ezigcina ukuhlolwa kwe-24h-performace, kungabonakaliswa iwaranti, ikhasimende lizokwaziswa futhi ukulungiswa okuzokhokhwa kuzokwenziwa.
I-Hielscher igcina ilungelo lokufeza ukuthuthukiswa kwedivayisi ngokunikezwa kwe-generator entsha.
Izindleko: i-EUR 1.920,00 inetha / USD 2,680.00 inetha lamadivayisi asebenza ngokugcwele